Atụmatụ 5 ị ga - eme n'oge ekeresimesi nke ụmụ gị ga - ajụ gị | Akụkọ Njem
5 atụmatụ ị ga - eme n’oge ekeresimesi nke ụmụ gị ga - ajụ gị
Maria | | General, Ihe ị ga-ahụ
Ahịa ekeresimesi na Plaza Mayor, otu n'ime ndị ama ama na Madrid
Onye ama ama ama aha ya bụ Andy Williams na-ekwukarị n’otu n’ime egwu ya a ma ama na Krismas bụ oge kachasị ịtụnanya n’afọ. A na-eji ọtụtụ narị ihe ịchọ mma na-enwu n'okporo ámá mma, obodo na-arara oghere pụrụ iche iji gbagoo ebe ngosipụta nke ọmụmụ Jizọs jupụtara na nkọwa ma enwere ọtụtụ egosi na n'oge a enwere ike ịnụ ụtọ ezinụlọ.
Oge ekeresimesi di ogologo ma umuaka na enwe a theiruri n’oge ezumike ha. Icheta ncheta puru iche nke ndi 2016/2017, N'okpuru ebe a, anyị na-agwa anyị atụmatụ 5 iji mee obere ụmụaka ndị a.
1 Ahịa ekeresimesi
2 Ekeresimesi ekeresimesi
3 Scenezọ usoro ọmụmụ Kraịst
5 Nleta nke Zoo
Ha mara mma nke ukwuu ma jiri ihe osise ekeresimesi chọọ ya mma nke ukwuu nke na echiche ị ga-eleta ha ga-atọ ụmụaka ụtọ. Karịsịa n'ihi na n'ime ha ị nwere ike ịchọta ụdị ihe ọ bụla metụtara ma ọ bụ na ọ bụghị na ekeresimesi na ngwaahịa gastronomic nke ga-akpali mmasị gị. Onye nwere ike iguzogide atụmatụ a?
Ọ nwere ọtụtụ ahịa ekeresimesi, mana ndị a ma ama karịa ha niile bụ nke Plaza Mayor. Ihe mejupụtara ya bụ ihe karịrị otu narị ụlọ ntu ebe ị nwere ike ịmasị ngwaahịa ndị a na-eme n'oge ekeresimesi dịka ihe ngosi ọmụmụ, ihe osise ma ọ bụ ihe ịchọ mma osisi n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'ime otu obere obosara n'akụkụ Plaza Mayor, e guzobela ahịa ọrụ na-atọ ụtọ. Yabụ ị nwekwara ike ịbịa leta nke ọzọ.
Na Valencia, a na-etinye ahịa ahịa Krismas nke Central Market ma ọ ga-emeghere ọha na eze ruo n'isi mmalite nke Jenụwarị 6. Na n'okporo ámá ndị dị nso (Barón de Cárcer avenue na Brujas square square) e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ ntu ebe ị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ maka ihe ngosi nke ọmụmụ Kraịst, ihe ịchọ mma Krismas na ụdị ụtọ dị iche iche nke ememme ndị a.
Ahịa Krismas kasị ochie na nke kachasị na Barcelona bụ Fira de Santa Llúcia, nke etinyere n'ihu katidral ahụ. N'ime ya ị nwere ike ịchọta site na ihe osise ọdịnala nke ọmụmụ ọmụmụ nke oge a na nke oge a.
Na gburugburu Fira de Santa Llúcia, a na-eme ihe ngosi dị iche iche banyere ihe ngosi nke ọmụmụ banyere ọ wholeụ maka ezinụlọ dum.
Kemgbe 1993, ụmụaka enweela ike ịbanye na ụgbọ oloko ekeresimesi iji hụ ihe ụgbọ oloko nke mmalite narị afọ nke iri abụọ dị na Madrid ka ha na-agagharị n'okporo ụzọ ugwu nke isi obodo na ogige El Pardo. Na mgbakwunye, n'oge njem ụmụ ntakịrị ga-anụ ụtọ anwansi nke ekeresimesi na ọbịbịa nke Royal Page nke ndị isi ha nke East.
Ihe eji eme njem ekeresimesi bu ugbo osisi ano, ndi nke mbu si na Strawberry Train na ugbo ala Pullman, ha nile bido n’afọ ndi 20. Dika akuko ohuru, n’afọ a, ugboala nri iri na ato nke WR 12955 ka etinyegoro n’ime ugbo ahia ekeresimesi.
Ihe omume a ga - eme na Disemba 27, 29 na 30 na Jenụwarị 2, 3, 4 na 5, 2017. Ọnụ ego nke tiketi bụ 13 euro maka ndị okenye na 10 euro maka ụmụaka. Na Jenụwarị 5 enwere ụgwọ otu oge nke euro 15. Tiketi a gụnyere nleta n'efu na Museum Railway ruo na njedebe nke Jenụwarị 2017.
Scenezọ usoro ọmụmụ Kraịst
Betlehem Barcelona 2016 | Foto site na La Vanguardia
Iwere ụzọ nke ihe ngosi nke ọmụmụ Kraịst bụ ụzọ kachasị mma iji cheta na ụbọchị ndị a nwere okpukpe. N'oge ekeresimesi a na-eme ncheta ọmụmụ Kraịst na onweghị atụmatụ dị mma iji mee ya karịa ị gara ileta ihe ngosi amamịghe dị iche iche gbasara n'akụkụ niile nke Spain.
Obodo Valparaíso de Toledo na-achịkọta otu n'ime ihe ngosi ngosi Castilian-La Mancha kachasị mma kwa afọ. N'ihe karịrị 200 square mita, nke nwere ọtụtụ narị ihe oyiyi na usoro ọkụ a na-apụghị imeri emeri, ọ na-anọchi anya nnukwu ihe ncheta nke obodo ahụ dị ka katidral, Alcázar, Puente de Alcántara, Puerta de Bisagra na nke Alfonso VI.
Dịka ihe ọhụụ, n'afọ a, ọ gbanwere isi ụlọ ọrụ ya wee hapụ ụlọ nzukọ parish Valparaíso iji biri na San Marcos Cultural Center.
Kwa afọ Plaça de Sant Jaume na-akwado ihe ngosi ọmụmụ amụrụ ama na Barcelona na kwa esemokwu. Dị ka ihe atụ, Krismas a na ihe nkiri ndị ọzọ na-emepụta Ememe Ngabiga na ihe nkiri ndị ọzọ n'ime nnukwu egosipụta na ndị amamihe atọ nọchiri anya ndị Catalan atọ.
Childrenmụaka ahụ ga-anụ ọkụ n'obi banyere ọnọdụ amụrụ ahụ La Caixa Social Work haziri n'ọfịs na Calle Sierpes nº85 dịka e mere ya na ụmụ bebi Playmobil. Na mkpokọta ihe oyiyi 3.000, agba lita 200, ụyọkọ osisi nke 250 mita na mpempe akwụkwọ polyexpan 200 mesoro iji mepụta ọnọdụ mbụ nke Ọmụmụ Kraịst.
A na-etinye mpaghara obodo ọmụmụ nke Madrid na Halllọ Nzukọ Obodo na Plaza de Cibeles. Ọ bụ ọrụ nke onye na-ese ihe bụ José Luis Mayo ma jikọta ọnọdụ ndị mara mma dịka nkwupụta okwu ya na ndị ọzọ ama ama dịka nkwadebe maka njem ndị Magi mere na Betlehem nke kpakpando na-agbapụ na-eduzi.
N'aka nke ọzọ, Palacelọ Royal ahụ nwere ebe a na-akpọ ihe ngosi ọmụmụ Neapolitan, nke ọnụ ọgụgụ ndị Neapolitan na ụlọ ndị a na-akpọ Prince Betlehem, malitere site na Caros IV mgbe ọ ka bụ Onyeisi nke Asturias. Ọ bụ otu n'ime mkpokọta kachasị mkpa na narị afọ nke XNUMX ka ejiri ọnụ ọgụgụ ọhụrụ na ụlọ Neapolitan mụbaa site na narị afọ ndị sochirinụ.
Pụrụ Iche Warner Madrid | Foto site na Citeyoco
Ekeresimesi bụ oge pụrụiche iji soro ezinụlọ ahụ gaa Ogige ntụrụndụ ebe ọ bụ na a na-eji ihe eji achọ mma edozi ihe niile n'oge a n'afọ. ma enwere ọtụtụ ọrụ emebere maka ihe ụtọ na afọ niile.
Maka oge mbụ, ogige ntụrụndụ nke Madrid ejirila ọtụtụ puku ọkụ nwere agba chọọ osisi na ihu mma mma. Ọnọdụ anwansi iji ju anya ma mee ka ụmụntakịrị rọrọ nrọ na mmemme nke mmemme gụnyere gụnyere ọbịbịa nke ndị amamihe atọ na ụlọ Santa Claus, n'etiti ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ.
N'otu aka ahụ, Parque Warner mepụtara ọmarịcha ihe ịchọ mma ekeresimesi maka ezinụlọ ya niile ka mmụọ ya nwee oge ezumike a. Ozugbo ị gafere n'ọnụ ụzọ ogige egwuregwu ahụ, ihe niile dị iche: ọkụ, snow, ọtụtụ narị igbe onyinye, amụma na ụlọ ndị ahụ
Na Christmas Port Aventura soaked in the best Christmas ikuku nke acha ọkụ, ibu onyinye na ịrịba ịtụnanya. Ọtụtụ puku ihe ịchọ mma na-achọ ohere ọ bụla mma ma na-enye ogige isiokwu a mmụọ mmụọ Krismas na-enweghị mgbagha.
Maka ekeresimesi a Port Aventura atụpụtala mmemme juputara na mmemme metụtara egwu, egwu emere maka mmemme ahụ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ Santa Claus na ndị amamihe atọ.
Nleta nke Zoo
Imefu ụbọchị na-ekpori ndụ okike bụ atụmatụ ekeresimesi onye ọ bụla masịrị. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ ezinụlọ na-anụ ụtọ otu ụbọchị na zoo, mana ọ na-arịwanye elu ịhụ ndị di na nwunye ma ọ bụ ndị otu enyi.
N'afọ a, Aquarium Zoo etinyewo ọnọdụ ọmụmụ ya nke mmiri n'ime mmiri shark. Ọnụ ọgụgụ ndị mejupụtara ya bụ nke methacrylate ma nwee ịdị elu nke otu mita na ọkara. N'oge ekeresimesi ha ga - eso nnụnụ shark ise, nnukwu shark shark, shark abụọ ojii, shark shark na nọọsụ.
Oge ọ bụla dabara adaba ileta Bioparc na Valencia mana ịme ya na ekeresimesi bụ ihe pụrụ iche. Na mgbakwunye, afọ a Biopar enwetala ọganihu nwa ya mere enwere ndị ọhụụ ọhụụ na-adọrọ mmasị na oghere a raara nye nchebe nke okike. Childrenmụaka ga - esi zute ozodimgba ozigbo Virunga, hyena Niru nwa ma ọ bụ nwa agụ owuru Ekon.
Bioparc bụ ebe mbido na anwansi na-enye, rue Jenụwarị 5, mmemme nke oge ezumike n'efu na ọdịnaya agụmakwụkwọ-agụmakwụkwọ. na egwuregwu na ulo akwukwo nke na enyere ndi obere aka ichota ihe di nkpa nke omume ha maka ichebe uwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 5 atụmatụ ị ga - eme n’oge ekeresimesi nke ụmụ gị ga - ajụ gị
Ọ dị ka oge ochie na enweghị mmetụta iji gwaa ezinụlọ ka ha gaa zoo maka nhọrọ ha. Ha kwesiri imechi ha niile ma kwusi ikwu okwu na igbu mmadu mgbe emebigara oke. Ihe nwute.
Elephant Nature Park, ndị njem afọ ofufo na Thailand